3 January , 2009 — Dilip Acharya आमाले खोजेको पहिलो कन्या गृहकार्यमा निपुर्ण थीईन, अशीक्षित भनी बाबुले फर्काईदिए। दोस्री कन्या शिक्षित र सुशिल थिईन तर नराम्री भनी छोराले ईन्कार गरिदियो । त्यसपछिको केटी बाबुले खोजे, शिक्षित र शुन्दर पनि, तर घर-धन्दामा अदक्ष भनी आमाले मनीनन्।
16 Responses to “बिबाह”
DEEPENDRA Says:	3 January , 2009 at 9:21 am Nice story!abiting one. The only way to campaign against dowry and other evil traditions that exist in our society is through promotion of awareness and ‘inclusive’ education policy. However, scenarios are already changing and we are bound to get rid of it someday.
उजेली Says:	3 January , 2009 at 10:40 am साह्रै नराम्रो बिहे भएछ । हाम्रो देशको नियति ठ्याक्कै शब्दमा उतार्नुभएछ दिलिप दाइ !!
कलमबीर_घोताने Says:	3 January , 2009 at 12:50 pm धन देखेपछि शिवजीको तीन नेत्र भन्थे, मानवजातिलाई त झन् के पो भन्ने। के गर्नु हजुर संसारमा अहिले मन भन्दा ठूलो मानिसलाई प्यारो धन रहेछ। यस्तै रहेछ यहाँको चलन…
pratima Says:	3 January , 2009 at 3:04 pm as far as i remember this story was one of the best in stoty compitition right…really an adorable one….
आकार Says:	3 January , 2009 at 6:14 pm विवाह गर्न लागेकी युवती को घर आएको केटाले सुन्दरता , माताले उत्तम धन , पिताले उत्तम विद्या , बन्धुबान्धव इष्टमित्रले केही उत्तम कुराहरु खोज्छन् ।
Sadhana Sharma Says:	3 January , 2009 at 9:58 pm साँच्चै घोषित / अघोषित रुपमा दाइजो प्रथा अझै पनि हाम्रो समाजमा छ ।। कहिले हट्ने होलान् यी विकृति ?? राम्रो कथा पस्कनु भएकोमा धन्यवाद!
सिकारु Says:	3 January , 2009 at 10:15 pm दिलिप जि सबै कुराहरु त साथिहरुले औल्याइसक्नुभएको छ । तरपनि हाम्रो संस्कारमा अझै पनि जरा गाडेरनै बसेको छ यो कथाले । सबैकुरा पैसामा नै बिक्ने।। सुन्दरता.. गुण.. दक्षता.. अनि माया.. पनि
दीपक जडित Says:	4 January , 2009 at 12:59 am बलियो कथा ।
बेदनाथ पुलामी ( उमेश ) Says:	4 January , 2009 at 4:27 am हाम्रो समाज को नियति ! हो, दिलीप जी ।
बिमल गिरी Says:	5 January , 2009 at 1:45 am दीलिप जीनेपालमा चलेको दाईजो प्रथा ऐले पनि ससक्त रुपमा काएमै छयो राम्रो होइन। कैले र कस्ले हटाउलान यी बिक्रिती?कथामा सुन्दरता र शैली अतिनै राम्रा छन। शुभकामना।
B.J. Dummali Says:	6 January , 2009 at 12:22 am यो सम्पत्ती भनु नै के भन्ने नभै नहुने भयो भने झनै लोभ्याउने, सम्पत्ते भयो भने मान्छे ले नर्कको यात्रा पनि गर्छन रे कुनै हाम्रा साहित्यकारको भनाई ठिकै लाग्यो। धन्यबाद दिलिपजी तपाइको धारिलो प्रहारको लागि शायद् हाम्रो समाजलाई यस्तै नै छोटा र छरिटा सन्देश मुलक कथा हरु चाहिएको छ अहिले।
Jotare Dhaiba Says:	6 January , 2009 at 6:14 pm समाजको कुरुप यथार्थलाई रोचक रुपमा कथानक्मा उन्नुभेको छ भएको वर्णविन्यासगत त्रुटिले भने अर्थको अनर्थ लगाउने देखियो । भौतिकताको अघि सम्बन्ध र आत्मीयता कति दयनीय बनेको छ !
Dilip Acharya Says:	8 January , 2009 at 3:08 pm टिप्पणिको लागी सबैलाई धन्यवाद् ।
अनी प्रतिमा यो कथा त्यहि हो। प्रसंगबस अरु साथिहरुलाई पनि जानकारी गराउँ, प्रथम नेपाल खुल्ला लघुकथा प्रतियोगितामा यो कविता ‘उत्कृष्ट दस’ भित्र परेर पुरस्कृत भएको थियो र पछि यौटा ‘संचयन’ भन्ने लघुकथा संग्रहमा पनि प्रकाशीत भएको थीयो ।
rastra Says:	23 January , 2009 at 10:49 am the story was fantastic
Luna Says:	4 June , 2009 at 5:41 pm समाज को कम्जोर पक्ष लाई दर्हो सँग लेख्नु भो थोरै हरफ मै पनि ।
Dilip Acharya Says:	5 June , 2009 at 6:48 pm धन्यवाद लुना जी, प्रोत्साहन दिनु भएकोमा ।